Araka ny fanapahana avy amin’ny Filohampirenena dia noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 05 septambra 2020 ny didim-panjakana hanohizana ny hamehana ara-pahasalamana hoentina mandrindra ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny 05 septambra 2020 ary mihatra avy hatrany. Ireo fepetra rehetra sy ny andinidininy mikasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika ny 15 andro manaraka dia hohazavain’ny Filoham-pirenena mandritra ny fandaharana manokana hotanterahana anio alahady 06 septambra 2020 amin’ny 08 ora alina ao amin’ny Televizionina Malagasy.
Niantsena no nivohany ny trano omaly zoma 04 septambra 2020, tokony ho tamin'ny 09ora maraina, tsy niverina i Andriantsiva Ny Riana Aroniaina na i Aro hatramin’ny maraina teo. Noho ny fiaraha-miasan'ny rehetra dia hita sy nisy nanatitra tao an-tranony i Aro. Nitondra ny fisaorana ho an'ny rehetra ny fianakaviany.
Betafo(Jereo Sary Tohiny)
Nanao taigin-droa tamin’ny moto, nifatratra tamin’ny trano kely fivarotana. Androany sabotsy 5 septambra 2020 tokony tamin’ny 2 ora maraina no niseho ny loza teo amin’ny sampanana miazo ny seranam-piaramanidina Manakara. Tovolahy iray, 27 taona, namoy ny ainy tamin’ny loza. Efa nalain’ny havany ny faty. (Jereo Sary Tohiny)
Hiantsena no nivohany ny trano omaly zoma 04 septembra 2020, tokony ho tamin'ny 09ora maraina, tsy niverina i Andriantsiva Ny Riana Aroniaina na i Aro hatramin’izao. Miantso fifarimbonana sy fanampiana ny ray aman-dreniny hitadiavana an’ity zazalahikely amin’ny sary ity. Manao short kely « vert armé » sy tee shirt orange misy tanany mainty i Aro. Nanao kiraro lamba espadrille efa malotoloto.14 taona i Aro, ary hiatrika fanadinana BEPC amin’ity taona ity.Eny Ambohidratrimo no monina i Aro, ary andeha eny amin'ny tsena Ambohidratrimo ihany izy izao tsy hita izao. Hilazao ny Zandarimaria akaiky, na antsoy ny Laharana 033 09 302 59 na ny 034 84 585 03.
May kila hotohoton’ny afo ny trano fialamboly Winkeders ao Belle-Rose Antalaha. Ny tolakandron’ny zoma 4 septambra 2020 no nitranga ny loza, izay tombanana ho vokatry ny ankoson’aratra (court-circuit). Namoy ny ainy tao anatin’izany ny zazalahikely iray, zanaky ny tompontrano. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 04 septembre 2020 10:16
Vatsy Tsinjo: Sakoroka Ambohipo
Nanomboka omaly ny fizarana ny Vatsy Tsinjo ho an'ny Ambohipo, boriborintany faharoa, Antananarivo Renivohitra. Tsy natao tety an-toerana ny fizarana na dia misy CEG sy EPP toerana malalaka, fa natao eny amin'ny filalaovam-baolina Oniversité Ankatso.Omaly alakamisy, efa nisy ny olana, ireo mpisera mpitatitra sy sarety efa nihatrana. Anio no voalaza hanohizana ny fizarana, efa tonga maraina be ny olona fa ny mpiandraikitra no tsy tonga, fa hoe miandry 2ème vague indray. Teraka ny savorivory ankilanja sora-baventy sy antso mégaphone eo amin'ny fokontany sy 3 chemins. (Jereo sary Tohiny)
Manao fanazarana dihy mirindra amin'ilay hira "Jerosalema", isany malaza ankehitriny ireo mpamonjy voina an'ny tanànan'Antananarivo etsy amin'ny foibeny Tsaralalana. (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka didy 07-HCC/AR ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana na HCC ny 31 aogositra 2020, milaza fa hita fototra ny fahabagan-toeran’ny solombavambahoaka ao amin’ny Distrikan’i Morombe, Faritra Atsimo Andrefana taorian’ny nahafatesan’i Rakotomalala Lucien, solombavambahoaka IRD voafidy tao Morombe, izay nodimandry ny 17 jolay 2020 rehefa notsaboina tao amin’ny hopitaly miaramila Soavinandriana. Ny andininy faha-3 amin’io didy no anambaràn’ny HCC fa depioten’i Madagasikara ny kandida Ediedy Adolphe, mpisolotoerana amin’ny lisitra IRD tao amin’ny fari-pifidianana Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Izy zany no handray ny toerana ao Tsimbazaza. (Jereo Sary Tohiny)